Tsy hita teo aminy intsony ihany koa ny ratsam-batany toy ny tongotra sy ny tanana raha karan-doha sy taolana kely sisa no tavela. Mponina eny Ambohimirary ihany izy io raha araka ny fantatra ary mpanasa lamba no asany. Vao tamin'ny alahadin’ny pentekosta teo tamin’ny 7 ora hariva no nahitan'ny fianakaviana io vehivavy io farany ary efa mamo izy tamin'ny fotoana niala tao an-tranony raha araka ny fantatra hatrany. Tombanan’ireo olona eny amin’ny manodidina ho nohanin’ny biby moa Itompokovavy raha ny mpitandro ny filaminana irery no afaka ny hamaritra izany. Efa misokatra ny fanadihadiana.